श्रीस्वस्थानी ब्रत कथा: श्रीस्वस्थानीको प्रभावले चन्द्रवती राजदरबार प्रस्थान (भिडियोमा) | Kendrabindu Nepal Online News
श्रीस्वस्थानी ब्रत कथा: श्रीस्वस्थानीको प्रभावले चन्द्रवती राजदरबार प्रस्थान (भिडियोमा)
६ फाल्गुन २०७५, सोमबार १७:५०
श्रीस्वस्थानी ब्रत कथा चलिरहेको छ । पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु भएको स्वस्थानी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन समापन गरिन्छ । एक महिनासम्म चल्ने श्रीस्वस्थानी ब्रतमा भगवान शिवको पूजा आराधना गरिन्छ ।
सत्य युगमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव पति पाउन श्री स्वस्थानीको ब्रत बसेको र चिताएको पुरा भएको विश्वासमा श्री स्वस्थानी ब्रतकथा र माघ स्नानको प्रचलन रहेको विश्वास गरिन्छ ।
विशेष गरि महिलाहरू मात्र ब्रतालु हुने यो ब्रत बस्नाले ब्रत कथामा बर्णन गरिएजस्तै सुख, शान्ति, समृद्धि मिल्नुका साथै रोगब्याध पनि नष्ट हुने विश्वास गरिन्छ । एक महिनासम्म चल्ने श्री स्वस्थानी ब्रत कथामा प्रत्येक दिन एक एक अध्याय वाचन गर्ने गरिन्छ ।
त्यसै क्रममा आज हामीले २९ औँ अध्ययाय वाचन गरेका छौँ यस अध्यायमा चन्द्रावती श्रीस्वस्थानी ब्रतका प्रभावले पहिलेको भन्दा पनि झनै सुन्दरी भएको कथा वर्णन गरिएको छ । साथै श्री स्वस्थानी ब्रतका प्रभावले चन्द्रवती पनि राजदरवार प्रवेश गरेको कुरा वर्णन गरिएको छ ।
श्रीस्वस्थानी ब्रत, श्रीस्वस्थानी ब्रत कथा
Prevस्मार्टका सेवा ४५ जिल्लामा विस्तार, १९ जिल्लामा फोर जी
सर्वनाम थिएटरमा नाटक ‘रुपाकृ’ मञ्चन हुँदैNext
श्रीस्वस्थानी ब्रत कथाः नवराजकी श्रीमती श्रापबाट मुक्त (भिडियोमा)
श्रीस्वस्थानी ब्रत कथाः स्वस्थानी माताको हेला गर्दा चन्द्रावती शाली नदिमा (भिडियोमा)
श्रीस्वस्थानी ब्रत कथाः नवराज राजा भएपछि माईत गएकी श्रीमती बोलाए (भिडियोमा)
श्रीस्वस्थानी ब्रत कथाः नवराज कसरी बने लावण्य देशको राजा ? (भिडियोमा)
श्रीस्वस्थानी ब्रत कथाः जब स्वस्थानी ब्रतको प्रभावले नवराज घर फर्किए (भिडियोमा)
श्रीस्वस्थानी ब्रत कथाः के छ २३ औं अध्यायमा ? भिडियोमा